Waxaa jira afar dhimasho oo dheeri ah oo ka mid ah aagga mitir ee magaalada Sioux ee ka socda
By Halima Osman • May 15, 2020
Waxaa jira afar dhimasho oo dheeri ah oo ka mid ah aagga mitir ee magaalada Sioux ee ka socda COVID-19 oo ah 30 qof oo ku kala nool labada Degmo ee Woodbury iyo Dakota.
Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa sheegaysa 18 kale oo Iowan ah inay u dhinteen guud ahaan 336 Iowans.
Ku dhowaad 400 kiis oo cusub ayaa ka dhacay Iowa iyo 38 kiis oo ka dhacay Woodbury County iyo 15 kale oo dheeri ah Dakota County oo ah wadar kabadan 3,600 kiis oo labada degmo ah.
Xayiraadaha oo dhan ayaa laga qaadi doonaa gobolka oo dhan Jimcaha, May 15
By Halima Osman • May 13, 2020
Xayiraadaha oo dhan ayaa laga qaadi doonaa gobolka oo dhan Jimcaha, May 15. Guddoomiyaha Gobolka Kim Reynolds ayaa ku dhawaaqay warkaas subaxnimadeedii shirkeeda coronavirus. Furitaanka waxaa ku jira ganacsiyada badankood.
Waxa ka jira kiisas badan oo cusub oo ah COVID-19 gudaha Dakota County
By Halima Osman • May 8, 2020
Waaxda caafimaadka ayaa ku warbixisay 361 xaaladood oo cusub in ka badan 1,400.
Lambarkani wuxuu yimid kadib tijaabinta dhamaan shaqaalaha xarunta Tyson ee Dakota County.
Waxaa jiray todobo geeri wadarta guud ahaan toban iyo toban dhammaan aagga magaaladaioio ee Sioux.
Waxa jira in kabadan 1,500 kiis oo togan oo ka jira Gobolka Woodbury.
Khamiista ayaa loo aqoonsaday tiradii ugu badneyd ee hal maalin dhinta Gobolka Woodbury oo wali
By Halima Osman • May 7, 2020
Khamiista ayaa loo aqoonsaday tiradii ugu badneyd ee hal maalin dhinta Gobolka Woodbury oo wali laga arko fayraska. Waxaa jiray seddex dhimasho oo dheeri ah oo loo aaneynayo COVID-19 oo laga diiwaan geliyey Gobolka Woodbury. Toddobo kun oo ku nool gobolka ayaa fayrasku sheegtey illaa maanta.
Degmada Dakota ayaa soo weriyey laba dhimasho oo dheeri ah wadarta 5.
Degmada Siouxland Health Health waxay soo sheegaysaa hal dhimasho oo dheeri ah oo ka dhacda Gobolka
By Halima Osman • May 6, 2020
Degmada Siouxland Health Health waxay soo sheegaysaa hal dhimasho oo dheeri ah oo ka dhacda Gobolka Woodbury laga soo bilaabo COVID-19. Wuxuu ahaa nin inta u dhaxaysa da'da 61 iyo 80 wuuna ku dhintay guriga. Marka, ilaa iyo hadda toddobo ayaa ku dhintey aagga metrooga ee magaalada'ioioio 'dhibaatooyinka ka dhashey fayraska.
Subaxnimadii Arbacada, Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa ayaa soo weriyey dhowr iyo toban kun oo dhimasho ah wadarta guud ee 219 Iowan.
Laba qof oo dheeri ah oo ku nool agagaaraha metro ee magaalada Sioux waxay u dhinteen COVID-19
By Halima Osman • May 5, 2020
Laba qof oo dheeri ah oo ku nool agagaaraha metro ee magaalada Sioux waxay u dhinteen COVID-19 wadarta guud ee lix qof.
Hal dhimasho ayaa laga soo sheegay Gobolka Dakota. Midda kale ee ku sugan Gobolka Woodbury waxay ahayd gabadh da 'ah.
Talaadadii, Iowa wuxuu soo sheegay maalinta ugu dhimashada tan iyo markii uu masiibada bilaawday. Sagaal iyo toban qof ayaa loo dilay dhibaatooyin la xiriira fayraska.
Waxaa jiray 63 kiis oo cusub oo ka dhacay Woodbury County iyo 9 Dakota County.